Wasiiru dowlihii labaad oo iska casilay xukuumadda Ra’iisul Wasaare Kheyre – Hornafrik Media Network
Wasiiru dowlihii labaad oo iska casilay xukuumadda Ra’iisul Wasaare Kheyre
By Liibaan Nuur	 On Jan 16, 2020
Cabdullaahi Faarax Wehliye oo ka mid ah musharaxiinta u taagan qabashada xilka madaxweynaha maamulka Galmudug ayaa ku dhawaaqay inuu iska casilay xilkii uu ka hayey xukuumadda Ra’iisul wasaare Xasan Cali Kheyre.
Musharax Cabdullaahi Weheliye ayaa wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta xukuumadda Soomaaliya, saqdii dhexe ee xalay ayuuna xilkaas iska casilay.
Musharaxa ayaa sababta uu isaga casilay xilkaas ku sheegay inay tahay isagoo doonaya inuu u tartamo xilka Madaxweynaha Galmudug iyadoo maalmaha nasoo aadan lagu wado inay magaalada Dhuusamareeb ka dhacdo doorashada loogu tartamayo xilkaas.
Ra’iisul wasaare Kheyre iyo golaha wasiirrada ee uu la soo shaqeeyey swddaxdii sano ee lasoo dghaafay ayuu uga mahadceliyey wada shaqeyntii dhexmartay intii ay ka wada tirsanaayeen xukuumadda Soomaaliya.
Wasiirka ayaa shir uu shalay ku qabtay Dhuusamareeb ku sheegay in xukuumaddu ay faragelin toos ah ku heyso dhismaha maamulka Galmudug, isagoo tilmaamay in handadaad lagu hayo xildhibaanada cusub ee Galmudug.
Musharax Cabdullaahi Weheliye ayaa la rumeysan inuu taageero ka heysto hoggaanka Ahlu-Sunna oo qeyb ka ah dhinacyada isku haya loolan doorashada Galmudug, ila markaana awood fiican ku leh baarlamaanka cusub ee Galmudug.
Axmed Cabdi Kaariye Qoor-Qoor oo isna ah musharax u taagan qabashada xilka madaxweynaha Galmudug ayaa sidaan oo kale maalin ka hor Dhuusamareeb ugu dhawaaqay inuu iska casilay xilka wasiiru dowlaha howlaha guud ee xukuumadda Soomaaliya.
Wararkii ugu dambeeyey Dhuusamareeb iyo loolanka loogu jiro xilka guddoonka baarlamaanka Galmudug
Dhalinyaro Soomaaliyeed oo dalka Iran ugu dhibaateysan “Keensada dowlad idin metesha”